FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA CATAHOULA BULLDOG - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Catahoula Bulldog
Alika Leopard any Louisiana Catahoula / Alika mpihetsiketsika Bulldog amerikana
'Lexi, ny vavy Catahoula Bulldog, 15 volana, dia olon-tiana iray, tototry ny baolina ary tia milomano sy maka. Somary saro-kenatra amin'ny olona vaovao izy, ary tsy maintsy manana fotoana kely vao zatra amin'izy ireo alohan'ny hamelana ny olona hanafika azy, saingy tsy dia masiaka amin'izany mihitsy izy. Matanjaka be koa izy, ary afaka mitsako rehefa tsy mamoaka ny angovo rehetra. Hendry be izy, ary mandray zavatra amin'ny fotoana voatanisa. '
shih tzu miaraka amin'ny down syndrome
Ny alika Catahoula Bulldog dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Louisiana Catahoula Leopard Dog ary ny American Bulldog . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Ny Catahoula Bulldog dia manana hoditra tery ary palitao fohy sy malefaka tena fohy. Amin'ny ankabeazan'ny tranga dia tsy manana akanjo lava ny Catahoula fa mety hampivelatra azy raha toa ka miaina anaty toetrandro amam-potoana na mangatsiaka kokoa. Ny sofina dia misy karazana na bokotra raozy ary indraindray dia henoina mba ho tsara tarehy. Ny lokon'ny maso dia mety tonga amin'ny volontany, manga, volamena, maitso emeraoda na mitambatra amin'ireo rehetra ireo. Ny palitao dia misy loko isan-karazany manomboka amin'ny merle ka hatramin'ny fotsy madio.
Ny Catahoula Bulldog dia mirona ho alika milamina nefa afaka mailo raha ilaina izany. Tena manan-tsaina sy mora zatra, tsy mivadika izy ireo ary tia ny ho eo akaikin'ny fianakaviany. Ity alika ity dia tia mampifaly ary tokony ampianarina izay andrasana aminy aloha. Mandefitra be amin'ny ankizy izy ireo. Ny Catahoula Bulldog dia mazàna mampiasa ny sofiny amin'ny fomba tena maneho hevitra, toy ny hoe miresaka amin'izy ireo. Manao alika mpiambina tsara. Indraindray izy ireo dia zatra mihaza sy lalao hazo.
Hahavony: 24 - 26 santimetatra (61 - 66 cm)
Milanja: 75 - 100 pounds (34 - 46 kg)
Hanao tsara OK ao amin'ny trano iray raha toa ka nampiharina tsara.
Ny Catahoula Bulldog dia mila raisina a mandeha isan'andro .
Kely ny filan'ny fikolokoloana. Tokony handro indroa isan-taona izy ireo (raha tsy miditra amin'ny zavatra iray ka maloto) ary miborosy tsara indray mandeha isan-kerinandro. Tokony hopetahana matetika ny hoho ary hadio hatrany ny nify. Ity karazana ity dia salan'isa amin'ny mpamafa hazavana tsy tapaka. Rehefa mitebiteby na miady saina izy ireo dia manana fironana handoaka bebe kokoa, indrindra rehefa mampinono azy ireo ianao.
Ny hybrid Catahoula Bulldog dia efa teo amin'ny 100 taona mahery ary ankehitriny dia matetika no nateraka Catahoula Bulldog ho any Catahoula Bulldog. Alika amerikana antitra be io ampiasaina any atsimo. Tsy mbola nisy firaketana tsara voatahiry ao amin'izy ireo. Ny anarana Catahoula dia avy amin'ny teny karana midika hoe 'rano madio.'
Sky the Catahoula Bulldog amin'ny faha-7 taonany— 'Ity no vadiko Catahoula Bulldog. Manana maso manga sy volontany iray izy. Izy no alika tsara indrindra nananako, toetra tsara, alika milamina mora mandeha. TIA baolina tennis fa mora milamina. Alika an-trano tsara, manodidina ny biby fiompy, mahatalanjona miaraka amin'ny ankizy . Te hangalatra azy amiko daholo ny olona, ​​lol. Mahagaga 55 lbs izy. '
Lexi ilay vehivavy Catahoula Bulldog amin'ny 15 volana
'Ity i Colt. Catahoula Bulldog 9 volana izy. Tiany ny milalao ... na inona na inona! Milamina tokoa izy, indrindra ho an'ny alika kely lahy! Mahavita be manodidina ny ankizy sy ny alika hafa misy antsika izy, na dia ny alika manodidina aza! Tiany i Ryver, sidekick keliny, izay Bulldog Amerikanina ary na dia misy fahasamihafana 5 volana eo amin'ny taona aza dia manao toa an'i TWINS izy ireo! '
Colt the Catahoula Bulldog amin'ny 9 volana
75-pon. vehivavy Catahoula Bulldog antsoina hoe Delta
'Tinkerbelle, alika kely Catahoula Bulldog dia miaraka amina fizaran-tany Irlandy sy a maso manga ary maso maintso! Izy dia avy amin'ny fako farany ary saribakoly izy! ' Sary natolotry ny Wilsons Kennels
'Ity no sakaizako nihazaza Reese 1 taona sy tapany. Izy dia Catahoula Bulldog miaraka amin'ny loko miavaka indrindra hitako tamin'izy ireo. Sarotra ny milaza azy amin'ny sary, fa izy dia lokon'ny voanjo sy sôkôla mifangaro, miaraka amina kôkôlà mainty any an-damosiny, ary ny tarehy sy tongolo sôkôlà mainty (ka izany no anarany Reese), ary 3/4 sofina. Afaka milalao an-tokotany izy ary mijery tsara ny zanako vavy amin'ny fotoana iray, nefa sariaka amin'ireo vahiny 'nasaina' ihany koa. Izy koa dia mpihaza kisoa mahery setra izay midina sy maloto ho iray amin'ireo alika jono tsara indrindra fantatro, izay afaka mamaky ilay kisoa koa. '
Litter of Catahoula Bulldog Puppies - 'The Catahoula Bulldog dia lakroa ekena eo anelanelan'ny Louisiana Catahoula Leopard Dog sy ny American Bulldog. Alika amerikana efa antitra izy io, ampiasaina any atsimo amin'ny fiasana, fihazana ary fiarovana ny fianakaviana / fananana ary koa ho mpiara-miasa manolo-tena. Ny alikanay dia voasoratra anarana amin'ny alàlan'ny Animal Research Foundation (ARF), ny fisoratana anarana tranainy indrindra amin'ny karazany rehetra. Ny alika kely dia mety amin'ny loko maro karazana, manomboka amin'ny merle ka hatramin'ny fotsy miaraka amin'ny maso volontsôkôlà, maitso, manga, volamena, na mitambatra amin'ireny. Alika alika mandehandeha ireo alika ireo fa tena tsara tarehy tokoa raha jerena miaraka amin'ny avana mandoko. ' Nahazoana lalana avy amin'ny Kennels Freedom an'i Waller
Catahoula Bulldog, Sary natolotry ny Waller Freedom Kennels
'Ity dia ohatra tsara amin'ny F1 Catahoula Bulldog. Ity dia Shugah an'i Wilson. Alika mahafinaritra izy, feno fahafinaretana! Tia ankizy izy ary milalao alika hafa. Tiany indrindra ny alika kely. Tena reny izy, ary hanadio ny alika kely ary hikarakara azy ireo, na dia tsy azy aza izany! Izy no baomba! ' Sary natolotry ny Kennels an'i Wilson
'Alika kely manodidina ny 9 herinandro merle Catahoula Bulldog avy amin'ny fako tamin'ny volana martsa 2007 - ny ankamaroan'ireny zanak'alika ireny dia manana maso fitaratra manga / maitso vaky.'
Alika kely meraho Catahoula Bulldog 9 herinandro
Fako alika kely 9 herinandro merle Catahoula Bulldog
Puppy Catahoula Bulldog, zaza 9 herinandro
4-jaza merle Catahoula Bulldog alika kely
Hijery ohatra hafa momba ny Catahoula Bulldog
Catahoula Bulldog sary 1
Lisitry ny alika Louisiana Catahoula Leopard Dog Mix
Jack Russell sy rat terrier mifangaro alika kely
mifangaro tery chihuahua terrier volo
alika tsara poodle mix puppy
mainty laboratoara sy ny manondro Mix